यस्ता पनि श्रीमान् ! ‘म अर्की महिलासंग गएकै हुँ, मलाई कुनै लाज लाग्दैन- यो संग आउन त यो राम्री हुनुपर्यो नी’ ? (भिडियो हेर्नुस्) – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ०९, २०७८ समय: १३:४३:३७
काठमाडौ । इटहरीमा अनौठो घटना भयो । एक महिला हरेक पटक आफ्ना श्रीमानको गल्ती ढाकछोप गर्थिन । धेरै पटक अन्य महिलासंग रंगे हात फेला पारिन् । तर श्रीमान सुध्रियलान् भन्ने उनलाई लाग्यो । तर जति पटक उनले माफी दिइन् उनी उनका श्रीमानको मनोबल बढ्दै गयो । श्रीमतीले दिएको माफीर्लाइ उनले कमजोरी सम्झिए । छोराछोरीको भविष्य हेरिन्, समाजको प्रतिष्ठा हेरिन् अनि श्रीमानलाई माफी गरिदिइन् ।
माया दनुवारको श्रीमानले यस्तो हर्कत गरेका हुन् । तर हुँदाहुँदा उनी घरमै आउन छोडे । घरमै आउन छोडेर वाहिर अर्की महिलासंग बस्न थालेपछि श्रीमतीले सहन सकिनन् । अनि मिडियाका मानिस बोलाइन् । श्रीमान र श्रीमतीलाई संगै राखेर जव युट्युवरले तपाईलाई श्रीमती हुँदा हुँदै अर्की महिलासंग जान लाज लागेन ? भनेर सोध्दा उनका श्रीमान भन्छन् के को लाज ? लागेन मलाई लाज ।
घरमा एक दिन बस्ने अनि दुई दिन अन्य महिलासंग जाने गरेको श्रीमतीको भनाई छ । यसो गर्दा पनि छोराछोरीको लागि सहेर बसें । अर्की महिला र उनको मोवाइलमा भएको कुरा मैले सुनेँ, मोवाइलमा रहेको रेकर्ड सुनाइदिएँ उनले मोवाइल नै फुटाइदिए श्रीमतीले गुनासो गर्दै भनिन् । श्रीमतीकै अगाडी उनले श्रीमतीले भनेका सबै कुरा सहि भएको र आफुलाई कुनै लाज नलागेको बताए ।
घरमा पैसा दिएकै छु, खान दिएकै छु केके लाज । म चार दिन त हो घरमा नआएको ? उनले भने, यो राम्री हुनुपरेन ? वैशाख १ गते देखि भने श्रीमान घरमै नआएपछि बाध्य भएर सार्वजनिक गर्नुपरेको महिलाले बताइन् । अब यसले जे गर्छे गर्छे, म त यस्तै हो , श्रीमान भन्छन् ।
६४३ पटक हेरिएको